China LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display Android 8.0 3 + 32G mpanamboatra sy mpamatsy | Lindian
Mandefasa mailaka aminay fepetra arahana
Guangzhou Lindian Intelligent Technology Co., Ltd dia mpanamboatra matihanina natokana ho an'ny fikarohana, fampandrosoana, famolavolana, famokarana, varotra ary serivisy amin'ny solaitrabe fotsy, solaitrabe maranitra, tabilao manan-tsaina mifandray, vokatra mifandraika amin'ny solosaina sy solosaina, be mpampiasa amin'ny fanabeazana, fampianarana , fivorian'ny orinasa, fampirantiana ary sehatra ho an'ny daholobe.
Miaraka amin'ny fitaovana Superior, haitao avo lenta sy vaovao ary manana ivon-toerana R&D avo lenta, ao anatin'izany ireo injeniera sy teknisianina 30, mba hanomezana vokatra sy serivisy tsara indrindra, dia nanangana rafitra fitantanana kalitao maoderina izay mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena isika. CE, CCC, ISO9001, ISO14001, mari-pahaizana OHSAS 18001 ROHS.
Ny vokatray dia malaza be any Eropa, Amerika, Azia atsimo atsinanana, Moyen Orient ary Afrika sns. OEM sy ODM dia ekena avokoa, Na ny fisafidianana vokatra ankehitriny avy amin'ny katalaoginay na mitady fanampiana injeniera ho an'ny fangatahanao. Izahay koa dia manohy mikaroka sy mamolavola ireo vokatra vaovaonay hatramin'ny fahafaham-po amin'ny fangatahana vaovao avy amin'ny mpanjifa. Ny kalitao avo indrindra, ny vidiny mirary ary ny serivisy tsara dia fampanantenanay ho an'ny mpanjifantsika rehetra
Ireo takelaka finday marobe marobe dia manana fiantohana feno sy fihenam-bidy ambany indrindra eo amin'ny tsena. Safidio ny habe dimy hafa amin'ny 55 ka hatramin'ny 98 santimetatra miaraka amina slot tsy voatery ao anaty PC ary ny interface manokana natokana ho an'ny touchscreens lehibe. Ny efijery rehetra momba ny vahaolana 4K dia feno endri-javatra
Ny ekipanay manam-pahaizana eto an-toerana dia afaka manome serivisy sy tohana mandritra ny androm-piainan'i Lindian anao
Miaraka amin'ny kalitao avo sy ambany fikojakojana, Lindian dia iray amin'ireo fampiroboroboana ifanakalozana mandroso indrindra eo amin'ny tsena.
Ny papa fotsy fotsy amin'ny kaonferansa dia manova ny asan'ny orinasao hahafahan'ny fifandraisana matanjaka, ny fifandraisana ary ny fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny teknolojia ifandraisana.
Rehefa mihalehibe ny filan'ny sehatra fianarana miara-miasa bebe kokoa dia mitombo koa ny filan'ny teknolojia ao an-dakilasy. Lindian dia mandray ny fampianarana lalina miaraka amin'ny tontolon'ny kilasy nomerika manan-tsaina.
Ny takelaka finday marobe izay nahazo mari-pankasitrahana marobe dia mamaritra ny ho avin'ny lakilasy
Ireto touchscreens interactive tena mafampana ireto dia mirehareha amin'ny fehin-kevitra 4K, fikasihana 30 isa, fotoana famaliana haingana, fiarovana sy fibaikoana fitantanana, mahatonga azy ireo ho tonga lafatra ho an'ireo fikambanana mila manome vahaolana izay hihazakazaka na hiala amin'ny tambajotra. Midira amin'ny kaonty Cloud anao sy ny fampiasa anao amin'ny alàlan'ny rafitry ny mombamomba anay.
Namboarina haharitra, ny efijery rehetra dia miaraka amina fiantohana feno avy amin'ny mpanamboatra.
Rehefa mihabe ny fampiasana ny haitao ao anatin'ny fanabeazana dia mitombo koa ny asa takiana amin'ny fitantanana fanavaozana, fanavaozana ary fanampiana ny mpampiasa. Io dia fiheverana lehibe ho an'ny mpitantana ny informatika sy ny rafitra rehefa mandinika ny haitao AV sekoly. Tsy ny Clevertouch ihany no mila manome tanjona kendrena amin'ny fianarana, na dia manatsara ny fiadanan'ny mpampianatra aza, dia mila mora tantana.
Previous: LYNDIAN Q Series Interactive Flat Panel Display Android 8.0 2 + 16G
Manaraka: LYNDIAN T Series Interactive Flat Panel Display Android 6.0 1 + 8G
Fampisehoana tontonana 75 interactive
Fampisehoana tontonana iraisana
Fanabeazana ho an'ny tontonana interaktif
Vidin'ny fampisehoana tontonana interaktif
Fampisehoana takelaka fisaka mifandraika
Fampisehoana tariby fisaka Smart Interactive
Fampisehoana tontonana 75 interactive, All in One Interactive Flat Panel, Fampisehoana tariby fisaka Smart Interactive, Fanabeazana ho an'ny tontonana interaktif, Kitiho ny fisehoan'ny Panel Flat Flat, Mpamatsy Whiteboard mifandraika,